Otu esi eleta Saudi Arabia site na UAE, South Africa, Argentina ọzọ?
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia » Otu esi eleta Saudi Arabia site na UAE, South Africa, Argentina ọzọ?
Airport • Akụkọ na -agbasa ozi Argentina • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Safety • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Saudi welitere ụfọdụ mmachibido njem
Ala eze Saudi Arabia nke mechiri emechi na nke dị omimi ugbu a ka ọ bụrụ mba kacha eme njem nlegharị anya n'ụwa.
Obodo a na -ebute ụzọ na ndu ndị njem nlegharị anya ụwa.
Taa, Saudi Ministry of Interior kwenyere na ọ ga -emepeghachi onye agbata obi ya, United Arab Emirates, na South Africa na Argentina.
A ga -anabatakwa njem ọzọ n'etiti alaeze Saudi Arabia na United Arab Emirates, South Africa na Argentina ruo ụbọchị Wenezde, Septemba 8. Septemba XNUMX. Ewepụrụ mba ndị a na njem '' ndepụta uhie '' nke Alaeze ahụ.
Mkpebi iwepu mmachibido njem njem dabere na nyocha nke ọnọdụ COVID-19 dị ugbu a na Alaeze ahụ, Ministri ahụ kọwara.
Ministri nke ime obodo kwuru na ụzọ a ga-esi kwụsị ọrịa COVID-19 ịgbasa bụ ịga n'ihu na-eme usoro mgbochi, dị ka iyi nkpuchi, ịdọpụ uche mmadụ, na idebe ihe ọcha.
Ruo taa, Tuzdee, Septemba 7, 2021, enwere ọrịa COVID-138 ọhụrụ na mmadụ isii nwụrụ site na coronavirus. Ruo taa, a kọọla ikpe 19 na mmadụ 6 nwụrụ.
Se Obio Ubọn̄ anamde idahaemi
Ka ọ dị ugbu a, Saudi Arabia na -akwalite mkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi iji nweta ọgwụ mgbochi nke 70% nke ndị mmadụ ọgwụ mgbochi nke ọma. Ka ọ dị ugbu a, mba ahụ enwetala ọgwụ mgbochi 45% yana 63% ndị natara ọgwụ izizi. Gọọmentị na -atụ anya na ọ ga -enweta ihe mgbochi igwe site na mbido ọnwa Nọvemba.
Na mgbakwunye na mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, mba ahụ eguzobela ebe nnwale na ebe ọgwụgwọ, na -enyere ọtụtụ narị puku mmadụ aka.
Naanị otu ọnwa na ọkara gara aga
Na ngwụsị Julaị 2021, Saudi Arabia etinyela mmachibido njem njem afọ 3 maka ụmụ amaala ya ma ọ bụrụ na ha mebie mmachibido iwu etinyere wee gaa mba ọ bụla na "ndepụta uhie" nke Alaeze ahụ. Na mgbakwunye na mmachibido njem njem afọ 3, a ga-atụnye ntaramahụhụ siri ike ma ọ laghachi.
Agụnyere na mmachibido njem ahụ bụ mba ndị a ga -ebuli echi - UAE, South Africa, na Argentina.
Kedu ihe achọrọ iji gaa Saudi Arabia?
Dị ka nke August 1, 2021, Saudi mepere ndị ọbịa mba ofesi gbara ọgwụ mgbochi ọrịa njem na visa njem. Ndị njem ga-enwekwa mkpuchi COVID-19 mgbe ha nọ n'Alaeze. A ga -etinye ego mkpuchi a na ego maka visa ndị njem. Iji lelee ntozu obodo maka mmemme eVisa site na ịlele ndepụta ahụ Ibe VisaSaudi. Mba niile edepụtabeghị nwekwara ike itinye akwụkwọ maka visa ndị njem nlegharị anya site na ụlọ ọrụ nnọchite anya Saudi Arabia kacha nso site na www.mofa.gov.sa
Ndị ọbịa niile batara na mba ahụ nwere visa njem nlegharị anya ga -enye ihe akaebe nke usoro zuru oke nke otu ọgwụ 4 amatala ugbu a: ọgwụ abụọ nke ọgwụ Oxford/Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech ma ọ bụ Moderna, ma ọ bụ otu ọgwụ mgbochi ọrịa emepụtara. nke Johnson na Johnson dere.
A ga -anabata ndị ọbịa gụchara ọgwụ abụọ Sinopharm ma ọ bụ Sinovac ma ọ bụrụ na ha anata ọgwụ ọzọ nke otu n'ime ọgwụ mgbochi anọ akwadoro n'Alaeze.
Saudi Arabia nwere mepere ọnụ ụzọ weebụ maka ndị ọbịa ka ha deba aha ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ha. Ebe ahụ dị na Arabic na Bekee.
A na -achọkwa ndị njem na -abata na Saudi Arabia ka ha nye ule PCR na -adịghị mma eweghị ihe karịrị awa 72 tupu ọpụpụ na asambodo ịgba akwụkwọ mgbochi akwadoro, nke ndị ọrụ ahụike ahụike na mba ahụ na -ewepụta.
Enweghị ihe mgbochi iche maka ndị njem ọgwụ mgbochi na Saudi.
Ndị njem niile na-abanye na visa njem nlegharị anya enyere na mbụ ga-akwụ ụgwọ SAR 40 ọzọ n'ọdụ ụgbọ elu nke mbata ha iji kpuchie mkpuchi maka mmefu ahụike ọ bụla metụtara COVID-19.
A na -adụ ndị njem ọdụ ka ha jiri ụgbọ elu ha họọrọ ka ha nyochaa ntinye mbata ugbu a tupu ha azụrụ tiketi.
Kedu onye ka nọ na '' red list ''?
N'ịwepụta mba atọ a ga -ewepụ na ndepụta echi, mba ndị na -esote enweghị ike ịga njem nwa oge na Alaeze ahụ:
Maka ama ọzọ, kọntaktị help.visitsaudi.com.